Nin Somali ah oo Weerar Mindi loo adeegsaday ku qaaday Dad ku sugnaa magaalo ku taalla Germany.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Nin Somali ah oo Weerar Mindi loo adeegsaday ku qaaday Dad ku sugnaa magaalo ku taalla Germany..
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, lix kalena waa lagu dhaawacay weerar Mindi weyn loo adeegsaday oo ka dahcay magaalada Germanrzburg ee dalka Jarmalka.
Nin Soomaali ah oo 24 sano jir ah ayaa la sheegay inuu weerarka qaaday, waxaana qabtay Booliska markii ay lugaha ka toogteen, isagoo dhaawac ah, iyadoo kadib la xiray, laguna ilaalinayo isbitaal.
Muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey ayaa muujiyey Nin Mindi weyn ku hubeeysan oo weerar ku qaadaya dadkii Wadadda marayey, kadibna ay iska hor yimaadeen Booliska degaanka Agagaarka Barbarossaplatz, ee bartamaha magaalada, ayaa la xiray aagga oo dhan inta xaaladu socotay.
Booliska ayaa aqoonsaday eedeysanaha oo wajiga afsaab ugu xirnaa, waana 24-jir Soomaali ah oo ku nool magaalada Wurzburg ee dalka Jarmalka. Xaaladiisa ayaa degan iyadoo rasasta lagu riday aanay halis gelin noloshiida sida ay sheegtay afhayeenad u hadashay Booliska.
Ninkan ayaa la sheegay inay Boolisku la socdeen xaaladiisa oo uu ahaa qof dhimirka ka xanuunsan, wuxuuna dilka geystay isagoo ku dhawaaqaya ‘Allaahu Akbar’.
Previous articleWasiirada Arrimaha Dibadda IGAD oo ka hadlay xaaladda Doorashada Soomaaliya iyo Bayaan kasoo baxay
Next articleAskarigii Mareykanka ee sida Cunsuriyadda ah u dilay George Floyd oo lagu xukumay 22 sano